Wondershare Mgbakwunye Mmemme - nye ụlọ ọrụ na-eduga commissions
N'ịwa gị revenue na Wondershare Mgbakwunye mmemme!
Welcome to Wondershare Mgbakwunye Mmemme! Isonyere anyị omume ugbu a na-eme ka $3.000 kwa izu! Anyị omume na-enye a-eri-irè ịgakwuru maka website nwe n'ịwa ọzọ ego enweghị ihe ọ bụla efu! Ndụ dị ka a Wondershare Mgbakwunye dị mfe na-atọ ụtọ! Olee ebe ọzọ ị ga-enweta dịkarịa ala 10 top n'ire software ngwaahịa na fọrọ nke nta n'ahịa onwe ha na irite ụlọ ọrụ na-eduga commissions?
Olee otú Jikọọ Anyị na-amalite Njọ?
Olee otú m edebanye?
N'ezie na ị nwere nza nke nhọrọ edebanye maka anyị dị na ọtụtụ top Mgbakwunye netwọk. Ihe ị chọrọ ime bụ họrọ adabara Mgbakwunye n'elu ikpo okwu, jupụta ụdị mgbe ahụ ị nwere ike nweta ihe niile malitere.
E Nwere Mgbakwunye Network:
Banye Me Up!
Gịnị ka m na-eme ma ọ bụrụ na m na Mgbakwunye ugbua?
Ị nwere ike họrọ gị Mgbakwunye netwọk n'okpuru nwere ike pịa "Gaa" na ịchọ "Wondershare" na n'elu ikpo okwu, gị na-eme ga-mma ozugbo site anyị Mgbakwunye faili.
Olee ka malitere enweghị ihe ọ bụla ahụmahụ?
Echegbula onwe gị banyere ya, anyị nwetara nza nke mpia nke nwere ike inyere gị aka n'ịwa ahịa mfe. Ị na mkpa na-enwe ike idetuo na mado HTML koodu na-edebe ya n'ụzọ ziri ezi n'ime koodu nke a Web page. Ọ bụrụ na ị mkpa ọ bụla ihe enyemaka ọzọ, biko kpọtụrụ anyị ugbu a.
Olee ụdị mpia otú Wondershare na-enye?
Anyị na-enye a nnukwu iche iche nke ad ụdị na-niile IAB (Internet Advertising Bureau) Dabara. Ndị a njikọ ụdị agụnye ọkọlọtọ (na a dịgasị iche iche nke nha), ederede njikọ, na ndị ọzọ elu njikọ ụdị. Ọ bụrụ na ị mkpa ọ bụla ihe enyemaka ọzọ, biko kpọtụrụ anyị ugbu a.
Olee otú m ga-esi na m ahịa akụkọ?
Dị nnọọ banye na Mgbakwunye netwọk, ego na-achịkwa obubọk, chọta "akụkọ", i nwere ike inwe pụrụ ịdabere na & ezi ezigbo oge enwetakwa nsuso & akuko nyere site ụwa na-eduga Mgbakwunye netwọk. Onye ọ bụla n'ime ha na-enye kpamkpam obi na ntụkwasị obi. 100% nche nkwa.
Olee otú n'ịwa ọzọ ahịa?
Anyị nwere nza nke ikpọ ego aka gị nkwalite, nke ị ga mụtara n'ebe a ma ọ bụrụ na ị na-abịa azụ ugboro ugboro, ma ọ bụ ị nwekwara ike denye aha na anyị kwa ọnwa Akwụkwọ Akụkọ atụmatụ irite ọzọ. Ọ bụrụ na ị mkpa ọ bụla ihe enyemaka ọzọ, biko kpọtụrụ anyị ugbu a.
Olee otú m na-akwụ ụgwọ?
N'ezie na ọ na-adabere na Mgbakwunye netwọk. Dị ka Mgbakwunye netwọk dị iche iche, ị ga-nhọrọ dịgasị iche iche ruru dị iche iche netwọk, họrọ kacha adabara otu! Atọ anyị ụtọ ịbụ free.
Olee otú m ga-enweta ịkwụ ụgwọ?
Ị nwere ike ịhọrọ inata gị ịkwụ ụgwọ site a ego na mail ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na obibi nke US ma ọ bụ Canada, site kpọmkwem nkwụnye ego ka a ẹkedọhọde akụ. A dịghị akwụ ụgwọ maka ọrụ a. Direct nkwụnye ego bụ nanị dị na US, UK, Germany, France, Sweden na Canada.
Commission ọnụego na Featured Ngwaahịa
Erughị USD $ 1999 30%
USD $ 4000 ka USD $ 5999 40%
USD $ 6000 ka USD $ 7999 45%
USD $ 8000 ma ọ bụ karịa 50%
Ịghọta ohere i nwere ike mgbe ka na-aga taa! N'ihi na ajụjụ ndị ọzọ, biko egbula akpọtụrụ anyị: Mgbakwunye # wondershare.com (dochie # na @)
Anyị Mgbakwunye N'uba
Na-ekwe nkwa ma ikike gị & uru na nke anyị, biko pịa mara Wondershare Mgbakwunye iwu.